Mugdi wayn oo soo galay mustaqbalka Memphis Depay ee kooxa Man United kaddib markii laga saaray…. – Gool FM
Mugdi wayn oo soo galay mustaqbalka Memphis Depay ee kooxa Man United kaddib markii laga saaray….
Byare May 21, 2016
(Manchester) 21 Maajo 2016. Waxaa shaki wayn soo galay mustaqbalka Depay ee kooxda Man United kaddib markii laga saaray shaxda kooxdiisa ee finalka FA Cup ay maanta ku wajihi doonaan Crystal Palace.
Xiddiga reer Holand ayaa loo sheegay inuusan xitaa ku jirin badelka kooxda Man United ee caawa fiidkii ku ciyaari doonta gigeda caanka ah ee Wembley.
Waa markii ugu horreysay xilli ciyaareedkan oo Depay laga reebo shaxda Man United.
Ila wareedyo laga helayo Man United ayaa xaqiijinaya inuusan la safrin xiddigaha Red Devils markii ay tareen ugu safreen London. 22-jirka ayaa markii ugu dambeysay la arkayay isagoo kabihiisa u dhiibaya mid ka mid ah waariyayaasha isagoona baabuurkiisa ka soo kaxeystay xerada tababarka.
Sikastaba, Depay ma uusan filanayn in lagu soo dari doono shaxda hore ee Man United u mataleysa finalka FA Cup ee caawa laakiin aad ayuu u murugooday markii loo sheegay in lagu soo daro keydka iska dhaafee uu kuraasta sare ka daawan doono ciyaarta.
Wuxuu Man United ugu soo biiray dhanka PSV Eindhoven isagoo waliba ku soo guuleysatay gool dhalinta horyaalka Holland, laakiin wax kastaa way isbadeleen oo wuxuu iminka waqti xun ku qaadanayaa Old Trafford, 27-kulan ayaa lagu soo bilaabay kal ciyaareedkan, 18-kulana badel ayaa lagu keenay wuxuuna dhaliyay 7-gool oo uu labo ka mid ah ka dhaliyay horyaalka Premier League.
Guardiola oo qorshaynaya in Alexis Sanchez uu geeyo Man City
Chelsea oo kor u qaaday qiimaha ay ku doonayso Radja Nainggolan